Somaliland Cause is Dead – Ka Tasho Somaliland Ku Tasho Adal Empire – Gadabursi Empire | Lughaya.Com
Somaliland Cause is Dead – Ka Tasho Somaliland Ku Tasho Adal Empire – Gadabursi Empire
Added by Adal on October 8, 2012.
Saved under Baaq
Xuduudaha Awdal Empire yaa nooga muhiimsan jiritaanka Somaliland hadii hal taako oo ka mid ah dhulkayaga la isku dayo in la taabto qadiyada Somaliland waa “Dead” Geedi socodka siyaasada Somaliland ma aha mid u dan ah boqortooyada Cadal.
Umada Soomaalidu waxay ku jirtaa wakhti kala guur; dadka u ololeeya qadiyada Somaliland ma arkayaan xiisada isa soo taraysa ee ay daawanayaan iyo kala dilka lagu wado midnimada shacabka ee laga soo shaqaynayey 21 ka sano. Xabaalo qodku waa xumaan qod ay reer Somaliland dib usoo qodayaan tacadigii la’isku gaystay. Dagaal sokeeye wax lagu faano ma laha; koonfur oo ilaa maanta dagaalamaysaa ninka Soomaaliga ah ee walaalkii dilaya Mujaahid looguma yeedho!
Qaran iyo qabiil meel ma wada galayo maadaama oo aad kala dooran kari waydeen qaranimo iyo qabiil nimo anagu waxaan dooranaynaa in wax dan ahi ayna ugu jirin reer Awdal, Selel, iyo Gebilay sii taageerida qadiyad ku socota khasaare oo ku dhisan nacayb oo maalinba khidad cusub hindisaysa oo ninkii sida fiican u fikirayey uuna muuqan kii xumaana la daawanayo.
Aaway Saami qaybsigii?
Dadka iska xidhan ee aan danbiga lagu haysan
Cadaalad darada iyo tacadi joogto ah
Culumo masaajidada dhul boobka ka talinaysa oo colaad abuuraysa, caaqilo siyaasiyiinta aflagaadaynaya, Siyaasi maangaab ah oo aan istaahilin in la dhagaysto.
Hadaba waxa reer Adal u dan ah inay isku tashadaan oo ay ka fikiraan horumarkooda iyo difaaca qarankooda. Ardayda ka baxaysa dugsiga sare waa in ay laba sano oo shaqo qaran ah siiyaan dhulkooda inta ayna jaamacaha galin. Waayo Somaliland waxay cadaysatay hub urursi iyo colaad hor leh maadaama oo la ictiraafi waayey oo ahayd arintii marka horeba shacabka kala hor joogtay ama cabsi ay ka qabaan xasiloonida Koonfur oo banayn karta in reer Adal si buuxda u taageeraan Soomaali wayn oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ka hawl galaan sadexda gobol ee Awdal, Sool iyo Sanaag.
Dugsiyada Adal ka jira waa in qaar laga dhigaa kuwo lagu barto difaaca qaranka “military School” ama Aasaaska Ahmed Gurey Military Institute of Saylac!
Somaliland waxa u dan ah inay ku eekaato labada gobol ee Waqooyi Galbeed iyo Togdheer oo laga reebo Buuhoodle; Awdal, Sool iyo Sanaag iyagaa ka tashan aayahooda.
Senior Saylicipress Media Group Member